असार १६ सम्म पास नभए एमसीसी खारेज हुन्छ ?? यस्तो छ तयारी – Sudarshan Khabar
असार १६ सम्म पास नभए एमसीसी खारेज हुन्छ ?? यस्तो छ तयारी
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। उक्त बैठकको एउटा प्रमुख मुद्दा एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले दिएको ५० अर्बको अनुदान संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय हो।
झन्डै एक वर्षदेखि संसदमा अड्किएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता यसपटकको बजेट अधिवेशनबाट पनि अनुमोदन हुने संभावना क्षीण हुँदै गएपछि यसको निरन्तरता र भविष्यबारे विभिन्‍न कोणबाट बहस सुरु भएको छ।
उक्त सम्झौता असार १६ गतेभित्र संसद्‌बाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सभामुख अग्‍नी सापकोटाले असार १७ गतेसम्म बैठक स्थगित गरेपछि निर्धारित मितिमा एमसीसी पास हुने संभावना लगभग सकिएको छ। प्रधानमन्‍त्री एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा हुँदाहुँदै सभामुखले सम्झौता अनुमोदनको मिति टार्न संसद् बैठक एक साता गरेपछि सभामुखको भूमिकाप्रति सरकारको असन्तुष्टि बाहिर आएको छ।
तर पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण एमसीसी पास हुने अवस्था नभएपछि ‘फेस सेभिङ’का लागि सभामुखमार्फत बैठक सार्न लगाइएको पनि हुनसक्‍ने आशंका पनि गरिएको छ। यसले एमसीसी थप अन्योलमा परेको छ।
एमसीसी सम्झौता असार १६ सम्म पनि संसद्‌बाट अनुमोदन नहुने भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप्‍न पहल सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले असार १० गते मन्त्रालयमा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे छलफल गरेका छन्।
सभामुखले संसद स्थगित गरेकै भोलिपल्ट असार १० गते अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोले परराष्ट्रमन्‍त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग फोन गरेर एमसीसी कार्यान्वयनमा भएको अलमल र ढिलाइबारे गम्भीर सरोकार छन्। उनले एमसीसी सम्झौताको भविष्य के होला भनी चासो राखेका छन्। विदेशमन्‍त्रीसँगको फोन वार्तामा ज्ञवालीले एमसीसी विवादलाई सकारात्मक रुपमा टुंगो लगाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको जबाफ दिएका छन्।
प्रकाशित भएको : June 26th, 2020